सलाम- श्रृगì - Articles/Interview - Nepali Students Chautari
Started by Mohan Bikram Thapa, Aug 09 2009 09:00 PM
सलाम- श्रृगाँ, सलाम- हेमे बेसारे र समशेर बिष्टहरु नागबेली बाटो हुँदै बुटौलीबाट हामीहरुको यात्रा अगाडि बढयो पाल्पातिर । । पाल्पा आफैमा पुरानो पस्चिमेली शासकिय अडड्ा र शिक्षित क्षेत्र । राणाहरुले आफनै प्रतिस्प्रधीहरुलाई लखेटनुपर्यो भने पस्चिम कमाण्डिङ्ग अफिसर बनाएर पाल्पा खेदथे । बैरागिएका छोटे राणाहरुमा यात उदार शासक आर्दसबादी सुधारबादी अथबा अर्का प्रताप मल्ल वा साहा जहाँ बन्ने होड चल्थ्यो । उनिहरु भ्ाने औकात अनुसारका रानी पोखरी र ताज महल बनाउथे । पाल्पा रिढी र ओरपर यस्ता अनेकौ बतासे किब्बदन्तीहरु छरिएका पाईन्छन । शासकहरुको अन्तर बिरोधले परिर्वतनकारीहरुका अभियानलाई साहायकपनि बन्थ्यो । ०७ सालमा यस्तै भयो पनि ।
शिक्षामा हरिहर पाठशाला चेतनामा भैरब पुस्तकालय आधुनिक शिक्षामा पाल्पा कलेज र अस्पतालमा पाल्पा मिसनको त्यतिकै योगदान छ यहाँ । बिबिध उदेष्यले भए गरेका ति कामले कालान्तरमा पस्चिमको आफनै बिसिष्ट पहिचान बनायो । पाल्प्ााको घरेलु उद्योगको बयाननै के गर्नु र पाल्पानै आखिर पस्चिम चेतनाको अगुवाई गर्ने आधार कसरी बन्यो वर्ग सर्घषको भट्ीबन्ने ऐतिहासिक आधार के थियो होला काग्रेसीहरुको प्रचण्ड बिजय अभियानमा पनि त्यस आधीँ बेहेरीलाई परास्त गरेका बामपन्थी र त्यस चेतनाका प्रतिनिधी कमल राज रेग्मीसङ्ग दागंमा युगबेाध दैनिकको स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रममा भेटिँदा मैले जिज्ञाशा राखेको थिँए - पहिलो नेपाली माओबादी कामी बुढा र हेमेबेसारेबारेमा । अनेकौ जिज्ञाशाको उत्तर भेटिए ।
पुरानो बजार घुमेर म अहिले श्रिनगर डाडाँमा छु । सिरसिरे हावाले गर्मीको महिनामापनि थुरथुर कमाएको छ । यहाँबाट एउटा आखाँले गर्बिला हिमाल र पाहाड देखिन सक्छ भने अर्काले लमतन्न परेको फाँटहरुलाई । नगरकोट र धुलिखेलका पर्यटन क्षेत्र यस्का तुलनामा फिका लाग्छन । नाम फेरिनेक्रम जतासुकै छ । उहिलेको बतासे डाडोँ अहिले श्रिनगर बनेको छ ।
#2 Mohan Bikram Thapa
Posted 09 August 2009 - 09:01 PM
राजनीतिक सर्घषकासाथै सशस्त्र बिद्रोहको ऐतिहासिक निरन्तरता पस्चिमको परिचय हो । नयाँ मुलक भनिने बाकेँ बर्दिया कैलाली कचंनपुर र दाग्ंामा लोकाभार आन्दोलनले गदरको बिरासत पायो । पस्चिमेली बिद्रोहमा सशस्त्र सर्घषको भूमिका लोकाभारको हकवाला बन्यॊ । त्यसलाई निरन्तरता दियो- भिमदत्त पन्तको बिद्रोहले । सपना शासकले मार्न सक्दैनन परिबर्तनको महायात्रा कसैले रोक्न सक्ब्दैनन भन्ने श्रृखंलानै गुल्मी श्रङ्गा किसान बिद्रोहको ऐतिहासिक निरन्तरता हो । त्यही बखत चलेको कामीको बिद्रोह । त्यसैको प्रभाब र परिणाम पाल्पा गुल्मी र अर्घाखाचीँको बामपन्थी आन्दोलनको र्पष्टभूमि हो । अहिले म आतुर छु त्यहाँ पुग्न ।
एकसरो घुम्टयालो बाटेा । यस्ता बाटोमा ड्राईभरहरुले दोश्रोचोटी गल्ती गर्ने अैसरनै पाँउदैनन भन्दै बिस्तारै जाँउ अबस्यै पुगिन्छ भनेर म बिष्टजीलाई अनुरोध गर्छु । कहाँ के छ भनेर आपुू जानकार भएको उनि बताउछन । बाजा बजाएर बिज्ञापन दिएर दुर्घटना आउँदैन भनेपछि बिस्तारै गाडी हाक्छन । सुनेको पढेको र गएको ठाँउ पनि आज अलग्गै सबेंदना सजाउने मेरो यो यात्रा बनेको छ । मेरो कौतुहुलता बुझेका बिष्टजी अजगंका पर्बतहरुलाई छिचोल्दै बग्ने रिढी गण्डकी रजैटा सेन र राणाहरुका दरबार र पहिचान देखाउन चाहान्छन । धार्मिक सगंम रिढीको जानेजतिको बेलिबिस्तार लाँउछन । पापपुण्यको बखान गर्छन । तर म त्यति धर्मप्रति उत्साहित नभएको र ऐतिहासिक महत्वमा मात्र धयान दिएकोमा आस्चर्य मान्छन । सालिग्राम हेर्न र खोज्न भने म चुक्दीन । तर पाँईदैन । मन र कर्मले धार्मिक नभएकोले नपाएको उनको ठम्याई छ । त्यहाँको सराय खेल हेर्न पाईएन । माघे सग्रान्तीमा कटिसकेको छ । पारम्पारिक युद्धकौसल बचाउन खेलको रुपमा सुरक्षित रहेको यो कला पस्चिममा ढाल तरबारको खेलमा अझै छ । म जाजरकोटको धिमे दमदालालाई सम्झन्छु । कसरी बहादुर शाहका परिष्कृत सेनालाई जाजरकोटेहरुले सोही यूद्धकलाले गर्खाकोट पराजय गरे ।
यस भन्दा पहिलापनि पाल्पा स्यााजा र गुल्मीको यात्रा नगरेको भने हैन । त्यसैबेला यि बिषय बस्तुहरु पात्र र प्रबृतिहरु कथा ब्यथाहरु त्यहाँ नभएका पनि हैनन । आफनो भूमिकासङ्गै मानिसले असरल्ल परेका बिषयहरुको गाम्र्भियता महत्व र ओजन बुझदो र स्वीकार्दाे रहेछ । आखाँमा दृष्टिकोण भरिएपछि गर्भैेमा पुरिएका महत्वपूर्ण सामाग्री सतहमा देखिँदा रहेछन । छटपटाईरहेका बिषयहरुले आफनो परिचय पूनरस्थापनाको लागी उजुरीगदार्ँ उत्खनन गरेपछि ति बिषयले बाणी पाउँदो रहेछ । यस पटकको गुल्मी यात्रा पनि मेरोलागी त्यस्तै- त्यस्तै भयो ।
हामी रिढीबाट माथी लाग्दछौ । बले टक्सार । कुने दिनमा बल बहादुर बलराम वा बल प्रसाद नामक ब्यक्तिले यहाँ टक्सार काटेको ठाँउ हुनुपर्छ । ब्यक्तिगत सम्पती बढाउन हो की ! राज्यलाई हाकाहकी चूनोैति दिन उस्ले यो काम गर्यो थाहा छैन । तर यो ठाँउ श्रृङ्गा किसान बिद्रोह बिष्फोट भएको थलो भने पक्कै हो । यस्बारे अझ दिबगत क। सिद्धिनाथ ज्ञावालीको अप्रकासित पाण्डुलिपीमा छ भन्ने सुनेको छु । मेरा आदरनिय मित्र लेखनाथ ज्ञावालीसगं श्रृगां बिद्रोहबारे कुरा हुदाँ त्यसैबारे अध्ययन गर्न आफु त्यहाँ सिक्षक भएर गएको तर सो पाण्डुलिपी शासकहरुसगं बचाउन भने नसकेर पछुताएको भन्नु हुन्थ्यो । अहिले बिस्मृतिको गर्भमा रहेको श्रृगां बिद्रोहका गाथाहरु रेग्मी मधुगुरु लेखनाथ ज्ञावाली र अरुबाट सुनेको आधारमा पहिल्याउने र खुटयान अथबा उत्खनन गर्ने प्रयास हो । यो भाबी बर्ग सर्घष र जनयुद्धको कसरी पे्ररक बन्यो भन्ने पनि हो । अझ मेरो प्रयास थुनि ताईबाङ्ग रोल्पाबाट सामन्तबिरोधी पहिलो माआबादी बिद्रोह थालनी गर्ने कामी बुढाको अभियान र हेम बहादुर कडेल र बेसारे सामन्तहरुले हेम बहादुर नगरकोटी कणेललाई हेमे र अर्काे बिद्रोहीलाई बेसारे भन्थे । यो बिद्रोह हेमे- बेसारे काण्ड भनेर चर्चित भयो को बिद्रोहको समयअबधी एउटै रहनुको तादम्यताको पनि अद्ययन गर्नुहो ।
श्रृङ्गा गाँउ । साहु खलकको बस्ती । जब दुई धनी सामन्त हुन्छन तब यात एउटाले अर्काको अधिन स्वीकार गर्नु पर्छ यात अर्काको अस्तित्व नास गर्न खेलमा होमिनु पर्छ । सम्पती र शक्तिको होड र भोकले मानिसलाई अपराधतर्फ डोर्याउनु बिष्व इतिहासकै निरन्तरता हो । सामन्त हरु टुटन सक्छन नासिन सक्छन तर परिवर्तनकारी शक्ति सगं झुक्न भने चाँहादैनन । स्तर अनुसार सबैतिर यो हुनु स्वभाबिकै हो । त्यस्तै थरी जिम्वाली कस्ले पाउँने छिन्ने हडप्ने केन्द्रिय शासकहरुलाई रिझाएर खोले-टोले शासकबन्ने होड श्रृगां गाँउमा पनि चल्यो । कणेल परिबार कौरब र पाण्डब झै दई कित्तामा बाढिए । श्रृगां हस्तीनापुर बन्यो । हेम बहादुर कणेल र बेसारे उनिहरुबाट लुटिनेमा पर्दथे । अति खति हुन्छ भने झै जब आवाज नभएका मान्छेहरु जाग्न थाल्छन तब बिद्रोह सालिन हुदैन । आफैले जन्माएको बिद्रोहको आधारले त्यसैलाई पहिलो डस्छ । श्रृगांमा बिद्रोह बिस्फोट भयो । त्यस्का लप्काले त्यो क्षेत्रै भूमरीमा पर्यो । म अहिले बसेको ठाँउ हेमे-बेसारेको पहिलो कारबाहीमा २०११साल कार्तिक महिना जात्राबाट सूरक्षा दस्तासगैं फर्किदै गरेका स्थानिय जिम्वाल मारिएको ठाँउ हो । यो बिद्रोह सामान्य रहेन । दबाउन सेनाको आन्तरिक टूकडीनै श्री प्रसाद बुढाथोकीको कमाण्डमा झण्डै १बर्ष जति सन्चालन गर्नुपर्यो ।
ब्ाले टक्सारबाट हामी पस्चिमतर्फ लाग्योै । अर्थात मुख्य थलो श्रृगाँतिर । मलिला चटक्क मिलेका बाह्रीका पाटा । अझैपनि तुजुक झल्काउने साहु खलकका बस्ती र उनिहरुलाई चुनौति दिन ललकारेझै लाग्ने वरपरकमा बस्ती । कतैन कतै हेमे-बेसारेको स्वर गुन्जन झैलाग्छ त्यो माटोमा । सानु चिया पसल । बुढा र जानकारजस्ता लाग्ने मान्छेहरुसगं हेमे- बेसारेबारे चर्चा चल्छ । साहुजी र अरुहरु आस्र्चय मान्छन । बिद्रोहीहरु चिहानबाट आएझै हुन्छ ।
किसान बिद्रोहले छापामार रुपलिन्छ । बेासारेको अर्धाखाचीँमा मित भनाउदोबाट हत्या हुन्छ । भिमदत्त पन्तलाई उस्कै मित लाल बहादुर थापाले मारेझै । सामन्तहरु आफनो लडाई आफु लडन सक्दैनन अरुको माद्यम अथबा भाडाका हत्यारा मार्फत । हत्यारकोपनि पेाल खुल्ला भनेर जेलमै प्रतिहत्या हुन्छ केनेडीकै हत्यारा मारे जस्तै । हेम बहादुर त्यहाँबाट भारत सिलगढी लाग्छन । झण्डै एक बर्षलगाएर श्रृगां बिदोह दमन हुन्छ । बिद्रोह इतिश्री अर्काे अकंमा हाम्रो यात्रा अगाडि बढछ तमघास तर्फ । स्थानिय रुरु यफयममा गुल्मी घन्किरहेको छ । म नेपली स्र्पाटाकस शमसेर बहादुर बिष्टको सहादत थलो अर्थात टाउको गिडेर झण्डयाएको थलोमा पुग्न आतुर छु ।
पंचायत बिरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेबापत उन्कोपनि भिमदत्त पन्तलाईझै टाउको गिँडेर आगामी बिद्रोहीको मनोबल टुटाउने शासकिय खेलको बिभत्स अभयास थलोमा । म अहिले तमघासको पावन थलोमा छुजहाँ बिष्टको टाउको ४८ बर्ष पहिला पचांयती शासकहरुले झुण्डयाएका थिए । मलाई जहिलेपनि डडेलधुराको टुडिखेल होस या यो तम्घास रोमनहरुले आफनो शासन बचाउन ग्लेडियटरहरुलाई झुण्डयाएको कपुबाको झझल्को दिन्छ । म फर्किन्छु मेरो तिर्थ स्थल गुल्मीको श्रृगां र तमघासबाट । सलाम स्पार्टाकस सलाम भिम दत्त र सलाम समशेर बहादुर बिष्ट । र सलाम हेमे-बेसारे कमरेड भन्दै ।
हरेक घटनाले भाबि दिनको उर्जा र प्रेरणालागी आधार तय गरिराखेका हुन्छ । त्यस प्रकि्रयाबाट गुजि्रने पात्रहरु समयका साक्षी भएरपनि नत त्यस्कॊ हेक्कै राखेका हुन्छन नत परिणामको हिसाब- किताब गर्दे भूमिका निभाएका हुन्छन । उनिहरु व्ार्गसोच अनुसार समय गुज्रेपछीमात्र इतिहासको गतिशील समिक्षा गरिदार्ँ ऊनिहरुकॊ हैसियत किटान गरिँदै नायक वा खल नायकको कित्तावन्दीमा पारिन्छ । अहिले म एउटा जनश्रुतिमै सिमित रहेको क्रान्तिकारी तिर्थस्थल अथवा बिस्मृतिको गर्भैमा पुरिएको नायकबस्ती अथवा श्रृङ्गाबाट तम्घास आईपुगेको छु । श्रृगाँ तँ भाबी बिद्रोहको आधारक्षेत्र र तमघास महान सहिद समशेर बिष्टको सहादतको पबित्र भमि । म तलाँई नमन गछ्र । बिदा हन्छ ।
By Narendra Jung Pitar
Edited by Mohan Bikram Thapa, 09 August 2009 - 09:02 PM.
#4 Basanta Pun
#5 Ram Prasad Rai
Posted 20 September 2009 - 10:03 AM
#6 Mohan Bikram Thapa
Posted 28 September 2009 - 12:06 AM
बसन्त , राम जि ले नरेन्द्र जि को आर्टिकल मन पराएकोमा धन्यवाद छ ।